I-IMEX yaseMelika ijonge kwikamva ngeNjongo kunye nokuBekwa kakuhle
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-IMEX yaseMelika ijonge kwikamva ngeNjongo kunye nokuBekwa kakuhle
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukubala kwakhona kuvuliwe! I-IMEX yaseMelika ivula kwiiveki ezimbalwa izisa uluhlu olubanzi lwamathuba oshishino, iiseshoni zokufunda kunye nethuba lokushishina - ekugqibeleni - liphinde liqhagamshele. Umboniso, owenzeka ngoNovemba 9-11 eLas Vegas, unezinto ezininzi ezintsha kunye nenkqubo yokufunda emiswe ngokuthe ngqo ngubhubhane ngeeseshoni zendlela yokwakha ngokuqinisekileyo kwikamva eliqaqambileyo. Ukudibana kwakhona kwishishini lemisitho yeshishini kulindeleke ukuba likhetheke ngakumbi njengoko i-IMEX America ibhiyozela uhlelo lwayo lwe-10th kunye nekhaya elitsha, iMandalay Bay.
Abathengi banokudibana nabathengisi behlabathi abajikeleza onke amacandelo oshishino kwi-IMEX America.
Phantse kuma-3,000 abathengi ababanjiweyo baqinisekisiwe ukuba basebenzise i-IMEX America njengeqonga lokuqalisa ishishini.
Iqela le-IMEX lenze inkqubo ebanzi yemfundo ekhanyisa ikamva lecandelo nendlela yokwakha ukuya phambili ngokuqinisekileyo.
Phantse i-3,000 yabathengi ababanjiweyo ngoku baqinisekisiwe ukusuka kuMntla Merika kunye nehlabathi liphela, kunye namakhulu abathengi abazimeleyo-ubukhulu becala abavela e-USA-bonke abo basebenzisa i-IMEX America njengeqonga lokuqalisa ishishini. Ishishini lihleli embindini womboniso kwaye abathengi banokudibana nabathengisi behlabathi abasebenza kuwo onke amacandelo omzi mveliso.
Oku kubandakanya indawo zaseYurophu iOstriya, iBelgium, iRiphabhlikhi yaseCzech, iCroatia, iFrance, iJamani, iGrisi, i-Itali, iIreland, iMalta, iNetherlands, iPortugal, iSpain, iSwitzerland, iScandinavia ne-UK. I-Australia, i-Korea, i-Japan, i-New Zealand, kunye ne-Singapore ziphakathi kwamazwe ase-Asia-Pacific aqinisekisiweyo kunye ne-Kenya, Morocco, Rwanda ne-Mzantsi Afrika evela e-Afrika. Ukusuka eAtlanta naseCalgary ukuya eLA naseVancouver, ababonisi baseMelika naseCanada basebenza. Bajoyina iindawo ezininzi zaseLatin America kubandakanya iArgentina, iBrazil, iColombia, iCosta Rica, iEcuador, iMexico, kunye nokunye.
Zonke iimveliso ezinkulu zehotele zamanye amazwe ziya kunye neehotele ezincinci, kunye nenani labathengisi betekhnoloji likhula ngemini. Lindela ukubona iCvent, EventsAIR, Hopin, Swapcard, RainFocus, kunye neMidlaloPlay phakathi kwabanye.
Unenjongo kwaye uqinisekile
Isazi ukuba izakhono kufuneka zihlaziywe emva konyaka onemiceli mngeni, iqela le-IMEX lenze inkqubo ebanzi yemfundo ekhanyisa ikamva lecandelo kunye nendlela yokwakha ukuya phambili ngokuqinisekileyo. Inkqubo yokufunda yasimahla e-IMEX America isungula nge-Smart ngoMvulo, ixhaswe yi-MPI, nge-8 kaNovemba ebandakanya imfundo ezinikeleyo yombutho, oogxa kunye nabaqeqeshi. Imfundo iyaqhubeka ngothotho lweeworkshops, iitafile zezihloko ezishushu kunye neesemina ngexesha leentsuku ezintathu zomboniso - zonke ziyilelwe ukujongana neendlela ezahlukeneyo zokufunda. Iiseshoni ziququzelelwe kwiitraki ezintsha, kubandakanya ubuGcisa kunxibelelwano, ukwahluka kunye nokufikeleleka, uBuchule kunye netekhnoloji; Ukubuyiselwa kweshishini, uthethathethwano lwekhontrakthi, uphawu lomntu, kunye nozinzo.
Iqela laseHilton lixoxa ngezona ndlela zibalaseleyo abazamkeleyo kunyaka ophelileyo Ukubuyisa okunenjongo-Izisombululo ezibonakalayo zokwenza kunye nokwenza iminyhadala kwihlabathi lasemva kobhubhane. UMarin Bright ovela kwiintlanganiso zeSmart wabelana "ngencwadi yokuphumelela ye-COVID" egubungela imveliso yosasazo, imvumelwano ebalulekileyo kunye neendlela zonxibelelwano kwi I-Linings zesilivere: Ukudibana kwezifundo zeengcali ezivela kwixesha le-COVID. Iqela likaMaritz liza kuphonononga ukufunda kwabo kwindyikityha yokufa kunye neenkcukacha ngendlela iminikelo yetekhnoloji entsha enokuthi ixhase ngayo iminyhadala yexesha elizayo Ukuphazamiseka ngexesha lokuchacha: UMaritz uvuselela amava omnyhadala ngetekhnoloji entsha.
Singazicingela njani iintlanganiso kunye neziganeko ngamava abonakalayo? Lowo ngumbuzo uDerrick Johnson abuza kwiseshoni yakheUmsebenzi obalulekileyo: Ikamva lamava kwinqanaba ledijithali neengcebiso ngendlela yokubandakanya abaphulaphuli "abaphazamisekileyo ngokwamanani". Ukudibanisa idijithali ngokwasemzimbeni kugxilwe kuko Iziganeko zeHybrid eziwela ukwahlulahlula ngokwamava ngokwasemzimbeni nangokwedijithali. Kule seshoni, uDax Callner, uMlawuli weQhinga eSmyle, wabelana ngezimvo ezenziwayo ekwenzeni amava ekwabelwana ngawo kunye nenethiwekhi yabathathi-nxaxheba abajoyina i-intanethi (i-URL) nakwizicwangciso zomzimba (i-IRL).
Ixesha lifikile lokuphelisa ubandlululo nokwamkela ukwahluka-kwaye ishishini lemisitho yeshishini likwindawo entle yokukhokela ngomzekelo. Ukwahluka, ke, kwenza umsonto ongundoqo kwimfundo, iminyhadala, kunye neempawu ezintsha ze-IMEX America.
Uthetha ngeShishini, umsitho odibeneyo we-IMEX kunye nemagazini i-tw, exhaswa yi-MPI, iphonononga iyantlukwano, ukulingana ngokwesini kunye nokuxhotyiswa kwabasetyhini. Xa isiza kule micimbi, abasetyhini kunye namadoda bahlala bethetha bodwa, kodwa bengengabo bodwa. Oku kucwangciselwe ukutshintsha kwi Ukukhetha kwamanenekazi: Incoko malunga neyantlukwano kunye nokulingana ngokwesini Apho uMichelle Mason we-ASAE kunye nomcebisi uCourtney Stanley bamema amadoda amabini kwingxoxo. Kukho nethuba lokujoyina amaqela amancinci eengxoxo kunye nabasetyhini abazii-trailblazers kwicandelo labo. I-Ashly Balding, iiNdawo eziDibeneyo zokuHlala kwiiNdawo eziManyeneyo; Fike Meg, IziganekoGIG; UTracy Stuckrath, uyachuma! iintlanganiso & iminyhadala; UJuliet Tripp, ukuJongwa kweKhemikhali; kunye ne-Human Biography kaNisha Kharé imiselwe ukuba yabelane Izifundo zobunkokeli ezivela kubafazi ababhinqileyo.
Iiseshoni zokufunda eziphonononga ezinye izinto zokwahluka zibandakanya Ukuhlalisa abantu abakhubazekileyo entlanganisweni yabantu kunye neentlanganiso kunye neminyhadala kwaye Ukubeka emsebenzini: Ukwahluka ngokobuhlanga kushishino lweziganeko Apho u-Elena Clowes onamashumi amabini anesibini avuya.
entsha IMEX | Abantu be-EIC kunye neLali yePlanethi kumgangatho wokubonisa kuya kukhuthaza uzinzo, iyantlukwano, impembelelo kwezentlalo kunye nokubuyisa. Abalingani baquka i-LGBTMPA, i-ECPAT USA, iMicimbi yoKhenketho eyaNgafaniyo, iNgxowa-mali yeShishini leNtlanganiso, iintlanganiso ezimalunga neShishini, iSiseko seSEARCH, iSiseko esingaphezulu kunye nokuNgaphaya kweHlabathi, kunye nokuCoca iHlabathi. Iqela le-KHL liza kumema abazimaseyo ukuba bakhe i-Clubhouse-indawo ekhethekileyo yokudlala yomntwana ogulayo kunye neqabane lakhe lesikolo.
Imicimbi yentlalontle ihambisa isizle kunye nokumangaliswa
Ngelixa umboniso uhlala liziko leshishini kunye nokufunda, kukwakho namathuba amaninzi okudibanisa ngaphandle komgangatho wokubonisa. Ukhenketho lwe-Bespoke lubonelela nge-lowdown eLas Vegas nokuba kukutya okugqibeleleyo, amava emfihlakalo okanye umkhondo wangaphakathi kwiindawo ezimbini ezinomtsalane: Ibhotwe likaKesare kunye neMandalay Bay. Kukwakho nesizathu sokubhiyozela imisitho yangokuhlwa kwiSayithi yeNite eyenzeka kwiRevenue World entsha, umsitho we-MPI Foundation otyikitye umcimbi weRendezvous eDrais kunye neHolo yeeNkokeli ze-EIC eMGM Grand.
Abantu abaninzi babize IMEX America ngokuthi 'ukubuyela ekhaya kolu shishino, 'Kwaye asinakulinda ukuba samkele ukubuyela kuluntu lwethu ngento emiselwe ukuba ibe kukudibana okukhethekileyo. Kutshanje ndibuyile kuhambo oluya eLas Vegas, ndizibonele ngokwam ukuba sisebenza njani ngokusondeleyo namaqabane ethu- kubandakanya nomzi wethu wokubamba kunye nendawo entsha- ukuhambisa umboniso okhuselekileyo kodwa ungabinandawo. Abazimasi banokulindela ukubanjwa okumnandi kwe-IMEX njengenxalenye yamava omboniso, ”UCarina Bauer, u-CEO weQela le-IMEX, ushwankathela.
I-IMEX America yenzeka ngo-Novemba 9-11 eMandalay Bay eLas Vegas nge-Smart ngoMvulo, exhaswa yi-MPI, ngo-Novemba 8. Ukubhalisa-mahala-cofa indawo Apha. Ngolwazi oluthe kratya malunga neenketho zokuhlala kunye nokubhukisha Apha.